ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တရားဝင်ထုတ်ပေးထားသည့် ဖောင်းကြွကားနံပါတ်ပြားများအစား ပလတ်စတစ်အပါအဝင် အခြားအမျိုးအစား နံပါတ်ပြားများပေါ်တွင် စာလုံးပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ရိုက်နှိပ်ပြီး တပ်ဆင်အသုံးပြုပါက မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေအရ သုံးလထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အချို့သောမော်တော်ယာဉ်များသည် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တရားဝင်ထုတ်ပေးထားသော ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားများကို သုံးစွဲခြင်းမပြုဘဲ ပလတ်စတစ်အပါအဝင် အခြားအမျိုးအစား 'အပြား' များပေါ်တွင် စာလုံးပုံစံအမျိုးမျိုးကိုရိုက်နှိပ်ကာ တပ်ဆင်အသုံးပြုနေကြခြင်းမှာ တရားဝင်ပါသလား? တရားဝင်သည်ဆိုပါက ထိုကဲ့သို့အသုံးပြုရန် မည်ကဲ့သို့လျှောက်ထားရပါသလဲ? တရားမဝင်ဆိုပါက အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် မည်ကဲ့သို့အရေးယူသွားမည်ကိုသိလိုကြောင်း မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဝန်ကြီးမှ ယခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တရားဝင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားများအား သုံးစွဲခြင်းမပြုဘဲ စာလုံးပုံစံအမျိုးမျိုးကို ပလတ်စတစ်နှင့်အခြားအမျိုးအစား 'အပြား' များပေါ်တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုထားခြင်းမှာတရားမဝင်ပါဘူး။ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေပုဒ်မ (၅၃) မှာ မော်တော်ယာဉ်နံပါတ်ပြားကို မထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်နံပါတ်ပြားကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေရန် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် မမှန်ကန်သောနံပါတ်ပြားကို မော်တော်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းကို မည်သူမျှမပြုလုပ်ရဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။” ဟု လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်မှ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေပုဒ်မ (၆၁) အရ မည်သူမဆို ပုဒ်မ (၅၃) ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားပါက သုံးလထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဟုပါရှိသည်။ အမှတ် (၂) ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ခွဲ (ရန်ကုန်) မှ (၁၄.၅.၂၀၁၉) မှ (၁၆.၆.၂၀၁၉) အထိ တရားဝင်မဟုတ်သော နံပါတ်ပြားတပ်ဆပ်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ် ၁၂၇ စီးနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၁၈ စီးအား အရေးယူထားကြောင်းလည်းသိရသည်။